Intente yokuRenta yoSapho / Inkampu yasehlathini
I-Forest Camping Mozirje kwilali yaseLoke edolophini iMozirje yindawo yokukhempisha enomtsalane enikezela ngeendawo zokuhlala ezahlukeneyo, iindawo zokuhlambela kunye namava okuyila okuzonwabisa kwangaphandle phakathi kwendalo emangalisayo.
Inezindlu ezininzi zokhuni ezinikezela imbeko kwilifa elityebileyo le-rafting yamaplanga kuMlambo iSavinja. Iindwendwe zisenokugxumeka ezazo iintente, zinokuqesha intente enazo zonke izinto zokulala, zibeke itreyila okanye iveni yazo okanye zichithe ubusuku kwi-hammock ebaleni.
Ukuhlamba kumlambo oqukuqela kule ndawo akunakwenzeka ukuba ungaxhathisi, nto leyo enika ukuhlaziyeka okugqibeleleyo kwabo baselula entliziyweni. Ukongeza kwindawo yokuhlala, sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zezemidlalo, ngelixa iintlobo ezilula zinokukhetha ukuphumla kwiithsaba zomthi, mhlawumbi kunye nencwadi evela kwilayibrari yethu ekhethekileyo elungiselelwe i-bookworms phakathi kweendwendwe zethu.
Iindwendwe zinokudibana kwaye zixubane kwiindawo ezahlukeneyo eziqhelekileyo. Enye yindawo yomlilo evulekileyo yokugcoba okanye ukuzonwabisa ngorhatya; enye inophahla kwaye ibandakanya ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo apho unokufumana ikofu yakho yokuqala yasekuseni okanye iti kwigadi yethu yemifuno, kunye nayo nayiphi na enye into encinci onokuthi uyilibele ukuhamba nawe. Ngaba kukho into engcono kunokoyikisa i-trout ngokuchasene nomculo ongasemva wesiginci kunye nokurhashaza komlambo?
Izindlu zangasese zikufuphi nendawo yokuhlala. Ummandla we-Forest camping unokufikelela kwi-intanethi ye-Wi-Fi, isiteji esihambahambayo seziganeko kunye neeworkshops, ithala leencwadi elincinci, kunye neendawo ezininzi zemidlalo (ibala lokudlala i-backetball, ibala lebhola lebhola elincinci) - konke okufunayo ukusondela kunye nobuqu kunye nendalo.
Umnikelo wethu ubandakanya uluhlu lwemisebenzi yezemidlalo efanelekileyo kwiindwendwe zayo yonke iminyaka. Kwinkampu, ungadlala ibhola yevoli okanye i-speedminton (okanye i-speedminton), beka ibhalansi yakho kuvavanyo lwe-slacklining okanye uqashe ibhayisekile ukuze ufumane okukungqongileyo.
Ukusebenzisana nenkampani iDolina Avantur, sikwaququzelela imisebenzi yabantu be-adrenaline: i-whitewater rafting, canyoning, kayaking, paragliding, kunye nezinye ezininzi.
Injongo yethu iqukunjelwa ngomnikelo ohlengahlengisiweyo kunye nolungelelwaniso lweentlobo ngeentlobo zeengxoxo ezisekwe kumxholo, ubugcisa okanye ucweyo oludumileyo. Kukwakho nebala lokudlala labantwana elinebhokisi yeemvakalelo kunye nemidlalo emininzi yeendwendwe zethu ezincinci.
Unikezelo lwethu lubandakanya uluhlu lwemisebenzi yezemidlalo efanelekileyo kwiindwendwe zayo yonke iminyaka. Kwinkampu, ungadlala ibhola yevoli okanye i-speedminton (okanye i-speedminton), beka ibhalansi yakho kuvavanyo lwe-slacklining okanye uqashe ibhayisekile ukuze ufumane okukungqongileyo.
Injongo yethu iqukunjelwa ngomnikelo ohlengahlengisiweyo kunye nolungelelwaniso lweentlobo ngeentlobo zocweyo olusekwe kumxholo, ubugcisa okanye ucweyo oludumileyo. Kukwakho nebala lokudlala labantwana elinebhokisi yeemvakalelo kunye nemidlalo emininzi yeendwendwe zethu ezincinci.
INDAWO - Kwilali ekhangayo yaseAlpine yaseLoke, ehleli kumlambo iSavinja kwiNtlambo ye-Upper Savinja, ukugawulwa kwemithi kunye nokulima kuseyeyona misebenzi iphambili. Ke ngoko, isiko lokukhwela amaplanga lisahamba ngamandla. Eli likhaya labantu abalungileyo kwaye ngamanye amaxesha ababi abamkela nabani na kwaye babameme ukuba bazame isisu sase-Upper Savinja Valley, okanye benze into ehlekisayo nje ngokuzonwabisa. I-Towering ekufutshane yintaba ye-1500 yeemitha ze-Golte, igadi yeentyatyambo ekhangayo i-Mozirski gaj kwaye ingekude kangako kwi-Logarska Valley ezukileyo.